IHuawei iya kubheja kwi-intanethi yezinto ngezixhobo zayo | I-Androidsis
IHuawei iya kubheja kwi-intanethi yezinto ngezixhobo zayo
UAlfonso de Frutos | | Huawei, MWC, Izaziso
Huawei ezinye iindaba ezinomdla kakhulu zisiwe kolu hlelo lwamva nje lwe-MWC. Ndithetha ngentsha Huawei P10 kunye ne-P10 Plus, ukongeza kwi-smartwatch yayo, iHuawei Watch 2.
Sele sikunikile ukubonakala kwethu kokuqala emva kokuvavanya zonke izisombululo zikaHuawei kwiMobile World Congress 2017, ngoku sikulethela udliwanondlebe apho uJuan Cabrera, uMphathi weMveliso eHuawei Spain, esixelela ngako konke oku kusungulwa kunye Ukuzinikela kukaHuawei kwi-Intanethi yezinto.
1 IHuawei iya kubheja kwi-Intanethi yezinto
2 ULeica uya kuqhubeka nokubakho kwizixhobo ezizayo zenkampani
3 Gcina i-Huawei P10 ngaphambi koMatshi 15 kwaye baya kukunika iHuawei Watch 2
IHuawei iya kubheja kwi-Intanethi yezinto
Ngexesha lokuboniswa kweHuawei ngaphakathi kwesakhelo sobulungisa, bendilindele ukuba umenzi athethe malunga nenyani yokwenyani. Kunyaka ophelileyo bazise ezabo iiglasi zokwenyani, isixhobo esingashiyanga ndawo yaseAsia malunga nento esazi kancinci ngayo, ke ukubona ukuba obu buchwephesha butshintsha njani, nokuba kungenzeka IHuawei ibheja kulo nyaka kwiiglasi zeVR ukufikelela kwimakethi yaseYurophu kunokwenzeka.
Ekugqibeleni kwakungekho njalo, kodwa uJuan Cabrera usenza izinto ezininzi zicace kuthi: kwelinye icala sineHuawei P10 Plus, ifowuni enesikrini se-2K ke sisisombululo esinomdla kakhulu ukonwabela umxholo weVR. Kodwa injongo kaHuawei kukujolisa kwi-intanethi yezinto.Kwizinto kuni abangazaziyo, ukuxelele ukuba zithini Ibandakanya ukubonelela ngezixhobo ezahlukeneyo ngesakhono sokubonelela ngolwazi kubasebenzisi.
Ngale ndlela xa sivala umnyango wendlu yethu siya kuba nakho ukufumana isaziso kwiwatchwatch yethu, okanye ukuba izitshizi zegadi ziyacinywa xa kufunyanwa isilwanyana esikufuphi okanye umntu kwaye sinakho ukusenza sisebenze kude.
Umxholo we-Intanethi yeZinto ubonakala unomdla kakhulu kum kunye nenyani yokuba iHuawei isebenza ekusebenziseni izixhobo zayo kwaye, kutheni kungenjalo, ekusunguleni isisombululo sayo njengoko yenzile kutshanje uGoogle ngeNdlwane yakho, ziindaba ezimnandi.
ULeica uya kuqhubeka nokubakho kwizixhobo ezizayo zenkampani
Esinye isihloko esithethe ngaso yayikukuba Umanyano phakathi kweLeica kunye neHuawei. Umvelisi waseAsia umangalisiwe ngexesha lokumiliselwa kweHuawei P9 ngokubonisa umnxeba ophindwe kabini osayinwe nguLeica.
Ngale ntshukumo UHuawei wema ngaphandle kwaSony, umboneleli omkhulu weekhamera zee-smartphones kwimarike, ukubheja kuLeica. Intshukumo enokuba ngumkhankaso wentengiso ukubonisa umnxeba ozahlula kwinkampani. Kodwa ukubona ukuba Umlingani 9 kwaye iP10 esandula ukwaziswa kunye ne-P10 Plus ziseneekhamera zeLeica, kuyacaca ukuba umanyano lomelele kakhulu.
Kwaye le yenye yeendaba ezimnandi. Kuyinyani ukuba Ikhamera ye-Huawei P9 isete umkhwa kwaye ngakumbi nangakumbi abavelisi babheja kule nkqubo yeekhamera ezimbini. Ukubona ukuba bobabini uLeica noHuawei bazakuqhubeka ukubonisa iimodeli ngolu hlobo lwekhamera, ivula uluhlu lweetheminali ezizayo ezivela kwezinye iimveliso ezinokusebenzisa iilensi ezifanayo. Kwaye sele sibonile ukuba iziphumo ezifezekisiweyo zilungile ngokwenene.
Gcina i-Huawei P10 ngaphambi koMatshi 15 kwaye baya kukunika iHuawei Watch 2
Okokugqibela, sinesithembiso esihle somenzi: Ukuba ubhukisha iHuawei P10 ngaphambi kuka-Matshi 15, ufumana iHuawei Watch 2 njengesipho. Ukuthathela ingqalelo ukuba iwotshi iya kudla i-euro ezingama-329, sisithembiso sokuthathela ingqalelo kwaye esineenjongo ezicacileyo: ukubiwa kwentengiso kwi-LG kunye ne-LG G6 yayo ngelixa ulinde ukufika kwe-Samsung Galaxy S8.
IHuawei iwenzile umsebenzi wayo kwi-MWC 2017 bonisa uthotho lwezixhobo ezinomdla kakhulu ezinokuphikisana ngaphandle kwamathandabuzo nabantu abakhuphisana nabo kwaye, njengesiqhelo kumenzi-mveliso, basungula isithembiso esingoyikiyo sokulindela kunye nokuthengisa iiyunithi ezininzi kangangoko.
Kunyaka ophelileyo khange babe nabuganga bokubonisa iHuawei P9 kumsitho apho i-Samsung yayihlala ingoyena mntu uphambili. Kodwa kulo nyaka ukungabikho komntu okhuphisana naye ophambili kudale isikhokelo esifanelekileyo seHuawei sokuhlutha indawo yokuqala malunga nentengiso kwihlabathi liphela kwi-Samsung. Sele iphumelele eSpain.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » IHuawei iya kubheja kwi-intanethi yezinto ngezixhobo zayo
IHuawei Bukela 2, siza kukucacisela kwimizuzu emi-3
Ezona zicelo zilungileyo zokucinezela kunye nokudibanisa iifayile kwi-Android